गचे चदारा आफ्नो साहूका कृषि औजारहरू आरनमा बनाउँदै ।
राहतले केही दिनको भए पनि गुजारा चल्ने आशमा वडा कार्यालय पुगेकी बिन्द्रा त्यहाँबाट फर्कंदा भने निराश भइन् । वडाले दिएको राहतले १३ जनाको उनको परिवारलाई त्यही दिन बेलुकीको छाक मात्रै टर्‍यो । “३० किलो चामल अनि दाल र तेल पाइन्छ भनेकाले केही दिनलाई ढुक्क भो भन्ने लागेको थियो, तर त्यो चामलले साँझको छाक पनि मुश्किलले टर्‍यो” बिन्द्राले भनिन्, “हामीलाई पाँच किलो चामल दिए, वडा कार्यालयले नगरपालिकामा भने ३० किलो दियौं भन्ने लेखेर पठाएछ ।”
बडिमालिका–९, सनाईबाडाका दल सनाईको आशा अझ ठूलो थियो । १५ जनाको परिवार पाल्न धौ–धौ भइरहेका उनी नगरपालिकाले दिने राहतले केही दिनको गर्जो टर्ने आशामा थिए । तर, नगरपालिकाले दिएको सात केजी चामलले उनको घरमा दुई छाक टार्न मुश्किल पर्‍यो ।
यस्तो किन त ? खोज्दै जाँदा महामारीको असरले हदैसम्म सताएका यहाँका गरीब र असहायले पाउने राहतमा पनि स्थानीय सरकारले र्‍याल चुहाएको भेटियो ।
बडिमालिका नगरपालिका–२, माझीगाउँका नन्दे दमाईको आठ जनाको परिवार छ । सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुसार उनले पूरै राहत पाउनुपर्थ्यो । तर, पाए १० केजी चामल, एक केजी नून र तेल एक लिटर मात्र । पूरै राहत पाउनुपर्ने बडिमालिका नगरपालिका–२ की धौली साउले पनि १० केजी चामल, एक केजी दाल, एक लिटर तेल र एक केजी नून मात्र पाइन् । मापदण्ड अनुसार आधा राहत पाउनुपर्ने बडिमालिका–१, सल्यानाका रामबहादुर कार्कीले पनि आठ केजी चामल, एक केजी दाल, एक केजी नून र एक लिटर तेल मात्र पाए ।
हीरासँगै राहत बुझ्न गएकी विमला विश्वकर्माले पनि दामासाहीले बाँडिएको चामल बोकेर फर्केको बताइन् । “राहत दिने भनेर मेलकाँधमा बोलाए, सात किलो चामल, एक पोको तेल र आधा किलो दाल दिए” उनले भनिन्, “सरकारले धेरै दिने भनेको थियो, हाम्रो हातमा थोरै पर्‍यो ।”
यसैगरी राहतमा ठगिएका शौरे लुहारले भने, “रेडियोले फुके अनुसार राहत नदिएपछि हामीले सोध्यौं । उनीहरूले हाम्रो वडा ठूलो भयो, सबैलाई पुर्‍याउनुपर्ने भएकाले अलि अलि दिएको हो भनेर टारे ।” खेती गर्ने जग्गाजमीन र आम्दानीको अरू केही बाटो नभएका पूर्व हलियाको भाग पनि खोसेर खाइदिएको भन्दै उनले गुनासो गरे, “हामी भोकानांगा मानिसलाई दिएको राहत पनि खाइदिनेहरूलाई पाप र धर्म भन्ने त लाग्ला नि !”
नगर प्रमुख पदम बडुवाल भन्छन्, “वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा राहत वितरण समिति निर्माण गरिएको छ । त्यसमा सबै दलका नेता छन् । नगरपालिकाबाट गएको राहत मापदण्ड अनुसार नै छ । तर मौखिक रूपमा गाउँमा राहत नपुगेपछि सबैलाई पुर्‍याउन खोज्दा थोरै भएको होला ।”
यस्तो नक्कली कामलाई नगर कार्यपालिकाले निर्णय गरेर किन पारित गर्‍यो ? बडिमालिका नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी यज्ञराज अर्याल भन्छन् “मैले त्यो डकुमेन्ट बनाएको होइन, त्यसको अभिलेखीकरण वडाले पठाएको र हामीले भुक्तानी मात्र गरेको हो ।”
बडिमालिका नगरपालिका वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष प्रकाश रावलले वडामा आएको राहत सबैलाई पुग्ने गरी एकनाशले बाँडेको दाबी गरे । उनले भने, “कतै पाँच केजी कतै १५ केजी बाँडेको भन्ने कुरा होइन ।” वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष विनोदकुमार बिकले पनि यस्तै भने, “नगरपालिकाले हाम्रो भागमा कम रकम विनियोजन गर्‍यो, हाम्रो जनसंख्या धेरै भयो । हामीले प्रत्येक घरमा सात केजी मात्र चामल बाँडेका हौं । ३० केजी पाउने कोही छैनन् । चामल नपुग्ने भएपछि हामीले मिलाएर बाँडेका हौं ।”